Yekuwedzera tambo yePA 6.6 base polymer inotangira muShanghai
ne admin pane 20-12-25
US nylon hofori Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) yakati yawedzera simba rayo re polyamide 6.6 base polymer muShanghai Chemical Industry Park (SCIP) ne40,000 t / y. Iyo yekuwedzera mutsetse yatanga mashandiro uye inounza huwandu hwenzvimbo panzvimbo yacho ku1,000,000 t / y, 30,000 ye wh ...
interpack uye zvikamu 2021 zvakanzurwa
Mukubvumirana nevamwe vayo vanobatana mumasangano nemuindasitiri, uye nekomiti yezano yevatengesi, Messe Düsseldorf afunga kukanzura zvese zvakapindirana nezvikamu 2021, zvakarongerwa kuitika kubva 25 Kukadzi kusvika 3 Kurume, nekuda kwezvirambidzo zvine chekuita neCOBVID -19 denda. “O ...
Evonik: Kugadziriswa muChinese 3D nyanzvi yekudhinda UnionTech - Zvishandiso zvitsva zvekuita photopolymer resins mukutarisa.
Evonik akawana chidimbu chevashoma mukambani yeChinese UnionTech kuburikidza neiyo Venture Capital unit. Iyo Shanghai-based kambani iri kushanda mumunda we stereolithography 3D kudhinda. Iyi yekuwedzera yekugadzira tekinoroji inoita kuti zvikwanisike, kuburitsa yakanyatsojeka uye yakadzama polima zvikamu. ...